Kalandarka Zaragozano: waa maxay, astaamaha iyo taariikhda | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 10/02/2021 13:07 | Kala bixid
Maanta waxaan ogaaneynaa jadwal xoogaa qaas ah oo ilaaliya quruxda iyo soo jiidashada maaddaama aysan xoogga saarin sayniska laakiin ay leedahay saadaalin sannad dhan oo aan lahayn wax cilmiyaysan. Waxay ku saabsan tahay Kalandarka Zaragozano. Waa daabacaad sanadle ah oo Isbaanish ah oo ay kujirto saadaasha saadaasha hawada iyo xiddigiska labadaba sanad dhan oo aan lahayn nooc cilmiga sayniska ah.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa dhammaan taariikhda iyo astaamaha kalandarka Zaragozano.
1 Asalka kalandarka Zaragozano
2 Taariikhda kalandarka Zaragozano
Asalka kalandarka Zaragozano
Daabacaaddii ugu horreysay ee kalandarka Zaragoza waxaa markii ugu horreysay la sameeyay 1840-kii. Waxaa diyaariyey cirbixiyeenka reer Spain ee Mariano Castillo y Ocsiero. Si aan kala go 'lahayn, marka laga reebo dhawr sano markii uu socday Dagaalkii Sokeeye ee Isbaanishka, waa la sii sharraxay oo la tafatiray. In ku dhow dhammaan daabacaadda isla sawirka astrologer-ka wuxuu umuuqdaa inuu tixraacayo abuurahiisa. Falanqeeyaha la yiraahdo waa nin muuqaalkiisu aad u qurux badan yahay. Timaha gabi ahaanba waa jajaban yihiin wuxuuna leeyahay hadal xushmad leh.
Waqtigan xaadirka ah, iyagu mar dambe lama daabicin jir ahaan, laakiin waxaa laga iibsan karaa internetka. Si kastaba ha noqotee, wali waxay haysaa naqshad isku mid ah daboolka iyo waxyaabaha ku jira. Magaca jadwalka taariikhda Zaragozan wax kasta oo qoraagu ka soo jeedo Zaragoza. Waxaa loo sameeyay sharfida cirbixiyeenka reer Spain Victoriano Zaragozano iyo Gracia Zapater. Cirbixiyeenkaan wuxuu ku dhashay Puebla de Albortón qarnigii XNUMXaad aadna caan ayuu u ahaa waqtigiisa. Wuxuuna wax badan ka ogaa cilmiga xiddigiska wuxuuna u diyaariyey almanacs la tartamaya saynisyahan kale oo Isbaanish ah oo u istaagay waxbarashadiisa cilmiga xiddigiska, xisaabta iyo taariikhda dabiiciga ah. Tartanku wuxuu ahaa Jerónimo Cortés.
Taariikhda kalandarka Zaragozano
Taariikhda kalandarka Zaragozano wuxuu bilaabmayaa kadib daabacaaddiisii ​​koowaad. Faafintiisu waxay gaadhay dhammaan koonayaasha Isbaanishka labadii qaab ee loo hibeeyay waqtigaas. Kalandarkaan wuxuu ka koobnaa a xaashida laalaabmay kalabar taasi waxay ka mid ahayd iibiyaasha ugu fiican qaabka kalena wuxuu ahaa daabacaad jeebka le'eg oo xaashi xaashi duuban.
Maanta waxaan la qabsanay inaan helno macluumaad aad u tiro badan oo ku saabsan saadaasha hawada kaliya ma ahan wadankeena, laakiin aduunka oo dhan. Waad ogaan kartaa saadaasha hawada iyadoo lagu mahadinayo moodallo kala duwan oo isku dhafan oo daraasad ku sameeya garaafyo, sawirro dayax gacmeed, qaaciddo xisaabeed iyo aqoon aad u ballaadhan. Thanks to tikniyoolajiyaddan, saadaasha hawada dhowr maalmood si saxa ayaa loo saadaalin karaa. Si kastaba ha noqotee, baahida loo qabo in la ogaado cimiladu maahan wax cusub. Baahidaasi waxay jirtay ilaa wakhtiyadii hore. Tani waa sababaha marwalba laysku dayo in la ogaado waxa dhici doona kahor.
Markii hore, saadaasha hawada waxaa lagu garan karaa iyadoo si toos ah loogu fiirsado astaamaha lagu arki karo goobta lafteeda iyo isbadalka saadaasha hawada sida daruuraha, dabaysha iyo heerkulka xilligaas jiray ayaa la darsay. Sidoo kale waa inaad ku tashataa waayo-aragnimada ay leeyihiin dadka waayeelka ah qaarkood ama saadaasha ka dhigaysa inay diiran yihiin iyo laba sida kalandarka Zaragozano. Sida maanta jirta, waxay ahaayeen kuwii u heellanaa beeraha kuwa dadaalka gaarka ah sameeyay si ay wax u qoraan oo u ogaadaan waxa sannadka soo socda uu noqon doono si ay u awoodaan inay doortaan xilliyada abuurka iyo goosashada si ay u fiicnaadaan wax-soo-saarka. Maanta dad badan waxay u qaataan indha indhayntan inkasta oo ay u sameeyaan si ka xiiso badan ujeedada sayniska.
Jadwalkaan ayaa la isticmaali jiray lana isticmaali jiray tan iyo markii la bilaabay buugga sariirta loogu talagalay beeralayda maaddaama dalagyada ay ku dhici karaan xaalado cimilo oo aan wanaagsaneyn. Abaaraha, duufaannada iyo wejiyada dayaxa ayaa saameeya dalagyada iyada oo ay ugu wacan tahay kalandarka Zaragozano ay suurtagal noqotay in aqoon dheeraad ah laga yeesho.
Qiimaha ugu horreeya ee kaalandarkaan lahaa 1840 waa inuu ku jiray reais maadaama ay ahayd lacagtii xilligaas jirtay. Ma ahayn ilaa 28 sano kadib in peseta lagu soo bandhigo Isbaanish inay tahay qandaraas sharci ah. Qiimuhu markiisii ​​hore wuxuu ahaa qiyaastii 15 senti 1920 (oo maanta u dhigma euro). Markay sannaduhu sii socdaan, qiimaheeda ayaa kor ugu kacay ku dhowaad 20 duro ama 100 pesetas ama 0,60 senti. Hada qiimuhu waa 1.8 euro. Sidaad u aragto, isbeddelka qiimaha sii kordhaya ee isla badeecadda ayaa horay u socotey sannado iyo sannado.
1900, kalandarka Zaragozano ayaa si weyn loogu iibiyay barxadaha waaweyn ee magaalooyinka iyo magaalooyinka. Inta badan macaamiisha waxay ahaayeen reer miyi iyo qiyaastii 1.270.000 nuqul ayaa la iibiyey. Maanta kaliya 300.000 nuqul ayaa la iibiyaa. Sida la filayo, horumarka sayniska, jadwalka noocan ah wuxuu leeyahay saameyn nostalgic iyo muxaafid ah oo u janjeedha xiisaha halkii laga adkaan lahaa cilmiga sayniska.
Haddii aan si wanaagsan u falanqeyno qaar ka mid ah bogagga taariikhda oo dhan, jadwalkaan wuxuu na tusi karaa waxyaabo badan oo xilli kasta jira. Tusaale ahaan, daboolka sanadka 1883 digniin ayaa la cabbiri karaa si aan loogu kadsoomin jadwalada kale ee ku dayashada mudan. Tusaale kale ayaa ah jeldiga iyo gudaha kalandarka Zaragozano laga soo bilaabo 1936. Arrintaan waxaa ku jiray khasnado qarsoodi ah oo xayeysiis ah oo tilmaamaya isla markaana muujinaya dhibaatooyin kala duwan oo bulshada xilligaas haysatay. Yaanan ilaawin wakhtigaas oo ku dhowaa Dagaalkii Sokeeye ee Isbaanishka weedho sida Viva Franco! ayaa laga arki karaa daboolka. iyo ¡Arriba Spain!
Intii lagu jiray dagaalkii dhexe haba yaraatee laguma talin in laga fogaado taliskii guulaystay waxaana lagu qoray daboolida baaqyadaas, waqtigaas siyaasad ahaan waa sax oo kororka iibka si ula kac ah ayaa loogu xagliyay. Sanadihii la soo dhaafay, xayaysiisyada kalandarka Zaragoza ayaa si tartiib tartiib ah loo yareeyay illaa iyo inta aysan sii jiri doonin. Waxaan dooneynay inaan siinno muhiimad iyo xayeysiin kalendaarkaan oo ay kujirto qiimaha iibkiisa ee dadweynaha. Daboolka hadda jira waxaa loo arki karaa inuu la mid yahay sanado ka hor wuuna sii ahaan doonaa calaamadda soo jiidashadiisa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto kalandarka Zaragozano iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Kalandarka Zaragoza